Apple waxay soo saari doontaa dokumenti dokumenti ah oo kusaabsan qofka Oprah Winfrey | Waxaan ka socdaa mac
Apple si ay u soo saarto dokumentari ku saabsan qofka Oprah Winfrey
Oprah Winfrey waa haweeney ku guuleysatay abaalmarin badan Emmy abaalmarinteedii ugu daawashada badneyd taariikhda telefishanka Mareykanka. Idhaleeceyn buugaagta liita, Aktarada loo magacaabay Oscar iyo tifaftiraha majalladeeda. Qofka ugu taajirsan Afrikaanka Mareykanka ee qarnigii XNUMXaad iyo qofka kaliya ee asal ahaan ka soo jeeda madow ee adduunka, oo haysta in ka badan bilyan doolar seddex sano oo isku xigta, wuxuu TV-ga Apple + + ku yeelan doonaa dokumenti dokumenti ah oo ku saabsan noloshiisa.
Mid ka mid ah dadka ugu muhiimsan Mareykanka 20-kii sano ee la soo dhaafay, wuxuu door gaar ah ku yeelan doonaa adeegga madadaalada ee baahinta Apple. Go'aanka waxaa lagu gaadhay in la sameeyo dokumentari ku saabsan Oprah Winfrey Waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood. Ma jiro taariikh bilow ah oo wax soo saar weli, laakiin sida xaqiiqda ah wax dhibaato ah kuma jiri doono xulashada mid, sababo la xiriira wada noolaanshaha wanaagsan ee u dhexeeya isaga iyo maareeyayaasha Apple TV +.
Aynu xusuusano Oprah horeyba wuxuu leeyahay meelo badan oo xarigga ah Barnaamij dhaleeceyn suugaaneed iyo barnaamij wareysi in Waxay gaareen wax ka badan guusha mudan. Hadda boosku wuxuu doonayaa inuu noo sheego sida Oprah ay ku noqotay qof guuleysta oo waxay yiraahdaan xitaa noqoshada haweeneyda ugu awoodda badan sanadka 2005, 2007,2008,2010Iyo 2013, sida laga soo xigtay Forbes.
Winfrey oo ka soo koray asalka hoose si uu u noqdo marti-qaade caan ah oo adduunka caan ka ah, soosaare, jilaa iyo samafalayaal. Mashruucan waxaa hogaamin doona guuleystaha Academy Award Kevin MacDonald iyo Lisa Erspamer, Emmy ayaa magacaabay, kuwaas oo caan ku ah ka shaqaynta biopic "Whitney."
Mashruuc cusub oo ku saabsan nolosha haweeneydan oo dabcan ah waa tixraac dhammaanteen ah ah sida loo guuleysto iyo wixii ka sarreeya oo dhan ayaa sare ku sii jiraya muddo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple si ay u soo saarto dokumentari ku saabsan qofka Oprah Winfrey
Xeedho MagSafe ayaa ku laaban kara Macs
Cherry filimkeedii ugu horreeyay ee rasmi ah oo lagu soo bandhigo Apple TV + bishii Maarso